United Airlines na -eme atụmatụ nhazi ụlọ kachasị ukwuu kemgbe Machị 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » United Airlines na -eme atụmatụ nhazi ụlọ kachasị ukwuu kemgbe Machị 2020
Ụgbọ elu ga -efe efe ụgbọ elu 3,500 kwa ụbọchị na Disemba - nke kachasị kemgbe mmalite oria ojoo na 91% nke usoro ime ụlọ nke Disemba 2019 - iji kwado mmụba a na -atụ anya na njem njem ezumike.
Nhazi ọnwa Disemba gụnyere njikọ ọhụrụ n'etiti Midwest na obodo ihu igwe dị ka Las Vegas na Orlando.
Usoro nhazi ọhụrụ gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu 70 kwa ụbọchị na -aga ebe a na -eme ski, gụnyere ọrụ ọhụrụ n'etiti Orange County na Aspen.
Dabere na United Airlines, nyocha njem njem ezumike na webụsaịtị United yana ngwa ụgbọ elu dị 16%, ma e jiri ya tụnyere 2019.
United Airlines kwupụtara taa na ọ ga -efefe nnukwu usoro ụlọ ya kemgbe mmalite nke ọrịa na -efe efe iji zute mmụba a na -atụ anya na njem ezumike, na -elekwasị anya na ijikọ Midwest na obodo ihu igwe dị ka Las Vegas na Orlando yana inye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70 kwa ụbọchị. ụgbọ elu na -aga ebe a na -eme ski, gụnyere ọrụ ọhụrụ n'etiti Orange County na Aspen.
Dabere na United Airlines, ọchụchọ njem njem ezumike na united.com na ngwa ụgbọ elu dị 16%, ma e jiri ya tụnyere 2019. Ụgbọ elu ahụ na -atụ anya ụbọchị njem ga -adọkpụ maka ezumike Ekele ga -abụ Wenezdee, Nọvemba 24 na Sọnde, Nọvemba 28, ebe ụbọchị ndị a ma ama maka oge oyi A na -atụ anya na njem ezumike ga -abụ Tọzdee, Disemba 23 na Sọnde, Jenụwarị 2.
Ụgbọ elu ahụ na -ezube inye ihe karịrị ụgbọ elu ụgbọ elu 3,500 kwa ụbọchị na Disemba, na -anọchite anya 91% nke ike ụlọ ya ma e jiri ya tụnyere 2019.
Ankit Gupta, osote onye isi nhazi nhazi na ịhazi oge na United Airlines. "Anyị maara na ezinụlọ na ndị enyi na -achọsi ike ijikọ oge ezumike a, ọ bụ ya mere anyị ji enwe obi ụtọ ịgbakwunye ụgbọ elu ọhụrụ nke ga -enyere ha aka ijikọ ma mee ememme ọnụ."
N’ọnwa Disemba, United ga -amalite ụgbọ elu ọhụrụ na -aga Las Vegas na Phoenix si Cleveland, na ruo Orlando sitere na Indianapolis. Ụgbọ elu ahụ ga -amalitekwa ụgbọ elu asatọ a ma ama na -ewu ewu site na obodo Midwest, gụnyere ụzọ gaa Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando na Tampa, na -enye ọpụpụ ụgbọ elu kacha elu si Cleveland kemgbe 2014 gụnyere ọrụ Nassau na Cancun. United ga -enye ụgbọ elu ruru 195 kwa ụbọchị gaa ebe iri na abụọ na Florida n'oge oyi a, ụgbọ elu kachasị na steeti Sunshine na akụkọ ụlọ ọrụ. United na-amalitekwa ụgbọ elu na-aga kpọmkwem site na Columbus, Indianapolis, Milwaukee na Pittsburgh ruo Fort Myers-nke bụ ụfọdụ ụgbọ elu ụgbọ elu ama ama ama ama na-aga ebe oyi n'oge oyi gara aga.
Ndị ahịa na -ahọrọ ntụ ntụ ọhụrụ nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ụgbọ elu na -aga ebe a na -eme ski na United karịa ụgbọelu ọ bụla ọzọ. Ụgbọ elu ahụ na -enye ụgbọ elu 66 kwa ụbọchị ihe karịrị ebe iri na abụọ ski gafee US, gụnyere ọrụ ọhụrụ malitere na Disemba a n'etiti Orange County na Aspen. Oge oyi a, United ga -enwe ụgbọ elu Aspen/Snowmass, Mammoth, Bozeman/Big Sky, Eagle/Vail, Kalispell, Gunnison/Crested Butte, Hayden/Steamboat Springs, Jackson Hole, Montrose/Telluride, Reno/Tahoe, Sun Valley si ọdụ ụgbọ elu ya.